कर्णालीमा निर्मित कोरानाबाट जोगाउने ‘क्वारेन्टाईन कि मृत्यू घर ? सरकारको मात्रै कति पर्ने भर ?’ – Enayanepal.com
कर्णालीमा निर्मित कोरानाबाट जोगाउने ‘क्वारेन्टाईन कि मृत्यू घर ? सरकारको मात्रै कति पर्ने भर ?’
२०७७, २५ जेष्ठ आईतवार मा प्रकाशित
जेठ २२ गते राती क्वारेन्टाइनबाट घर फर्केपछि पञ्चपुरी एक का एक २० वर्षीया युवाको श्वास फेर्न समस्या भएका कारण विहीबार मृत्यू भयो । उनको मृत्यू पछि कोरोना पोजेटिभ देखियो । क्वारेन्टाईनबाट घर फर्किंनु पूर्व उनको आरडिटी परिक्षण गरिएको थियो । उक्त आरडिटी परिक्षणले उनमा नेगेटिभ देखाएपछि उनी खुशी हुँदै साढे ६ घण्ट लगाएर घर पुगेका थिए । उनको खुशी विहीबार राती दुइ बजे नै सदाका लागि अन्त्य भयो । उनले आफ्नै गाउँमा रमाउने उदेश्यका साथ भारत देखि नेपाल आएका थिए । उनका सपना सदाकालागि जमिनमुनि पुरिएर गए ।
दैलेख जिल्लाको दुल्लु नगरपालिका ११ का एक युवाले गएको शनिबार ज्यान गुमाए । उनी क्वारेन्टाईनमा बसिरहेका समयमा एक्कासी ढलेका थिए । उनी फेरि नउठने गरेर नै ढले । यो संसारबाट विदा भए । उनलाई आफू कुन रोगका कारण ज्यान गुमाउँदैछु भन्ने सम्म थाहा भएन । उनको स्वाव संकलन १५ जेठमा भएको थियो । त्यसको नतिजा नआउँदै गत शनिबार उनको मृत्यू भयो । उक्त नतिजाले उनको कोरोना पुष्टि भएको बतायो ।
कोरोना संक्रमणका कारण कर्णालीमा भएको पहिलो मृत्यूको एक साता नवित्दै कर्णालीमा मृतकको संख्या तीन पुगेको छ । शनिबार डोल्पामा कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण एक जनाको मृत्यु भएपछि मृत्यू हुने दैलेख, सुर्खेत र डोल्पाका एक एक जना रहेका छन् । जगदुल्ला गाँउपालिका–३ का ५८ वर्षीय पुरुषको मृत्यु भएको हो । यहि जेठ १८ गते नेपालगञ्जबाट डोल्पा पुगेका उनलाई क्वारेन्टाइनमा राखिएको थियो । उनी लामो सममदेखि दमको रोगले पीडित थिए । पछि उनलाई होम आइसोलेसनमा राखिएको थियो ।
कर्णालीमा हालसम्म मृत्यू भएका तीनै जनाको मृत्यू पछि कोरोना पुष्टि भएको छ । अर्थात उनीहरुले जीवित हुने समयमा आफूलाई कोरोना छ कि छैन भन्ने थाहा नै पाएनन् ।
अनेरास्ववियू मध्यपश्चिमाञ्चल केन्द्रीय क्याम्पसका पूर्व अध्यक्ष अमर शाही कर्णालीमा निर्माण गरिएका क्वारेन्टाईनमा बस्नु भन्दा घरमै सुरक्षित तरिकाले बस्न र स्वास्थ्यकर्मीको प्रत्यक्ष निगरानीमा बस्न सके सबैका लागि राम्रो हुने धारणा राख्छन् । ‘अहिले कर्णालीमा निर्माण गरिएका क्वारेन्टाईन डब्लु एचओको मान्यता अनुसारका छैनन् । त्यो निर्माण गर्न सरकार सक्ने अवस्थामा छैन ।’ उनी भन्छन्, ‘अहिले भएका विद्यालयमा भारतबाट आएका नागरिकहरु पर्याप्त स्थान नहुँदा नहुँदै पनि कोचेर राखिएको छ । यसले एकातिर राज्यको ठूलो सम्पतिको नोक्सान गरेको छ भने अर्कोतिर कोरोना संक्रमित नभएका अन्य युवामा पनि कोरोना जोखिम बढाइदिएको छ ।’ यसको एकमात्र विकल्प भनेको घरमा अलग कोठा हुने नागरिकलाई उनीहरुकै घरमा पठाउने र सेल्फ क्वारेन्टाईनमा नै बसाउने गरि योजना बनाउनुको विकल्प नभएको उनको भनाई छ । उनले सरकारको भर परेर मात्रै कोरोनाबाट नजोगिईने बरु हरेक व्यक्तिले सावधानी अपनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
प्रदेश अस्पताल कालागाउँका बालरोग विशेषज्ञ डा. नवराज केसीले कर्णालीका क्वारेन्टाईन र आइसोलेसन विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड अनुसारका बनाउन नसकिएको बताए । ‘क्वारेन्टाईन राम्रो बनाउन आवश्यक छ । क्वारेन्टाईन भनेको कोरोना संक्रमण फेलनबाट रोक्ने यो यस्तो विधि हो कि राम्रो सँग गर्यो भने पिसीआर आरडिटी केहि गर्नै पर्दैन । पहिले धेरै दिन क्वारेन्टाईनमा राख्ने प्रचलन भएपनि अहिले चौध दिन मात्रै सुरक्षित रुपमा क्वारेन्टाईनमा राख्नु पर्ने अवधारणा आएका कारण चौध दिन क्वारेन्टाईनमा सुरक्षित राख्नुको विकल्प छैन ।’ डा केसीले भने, ‘अहिले कर्णालीमा निर्माण गरिएका क्वारेन्टाईन असुरक्षित त छन नै, क्वारेन्टाईनमा दश दिन बसेको व्यक्तिको पनि नयाँ क्वारेन्टाईनमा बस्न आएका नागरिकहरुसँग सहजै सम्पर्क हुने वातावरण हुने गरी निर्माण गरिएको छ । यो अत्यन्तै खतरनाक छ ।’
डा. केसीले १४दिनसम्म सुरक्षित रुपमा क्वारेन्टाइनमा राखेको खण्डमा रोग सार्नै क्षमता संक्रमितमा कमी हुने बताए । ‘रोग हुनु र सार्न सक्नु फरक कुरा हो । रोग हुनु र नहुनु उपचारको विषय हो । समूदायका लागि रोग सार्छ कि सार्दैन भन्ने कुरा ठूलो हो । समूदायमा रोग नसरोस भन्नेमा हामी सबैको ध्यान जान आवश्यक छ ।’ उनले भने, ‘पहिलो दिन कवारेन्टाईन छिरेको व्यक्तिको दोश्रो तेश्रो दिन छिरेको मान्छेसँग सम्पर्क हुनु हुँदैन । दशौं दिन छिरेको व्यक्तिसँग सम्पर्क भएको खण्डमा फेरि एक दिन भनेर गिन्ती गर्नुपर्ने अवस्था आउने गर्छ ।’
उनले सरकारले कोरोनाका बारेमा बारम्बार योजना बनाएपनि दीर्घकालिन रुपमा कति व्यक्ति आउँछन भन्ने कुराको यकिन गर्न नसकिएको बताए । ‘पहिले नै एक लाख नागरिक आउने, पच्चीस हजारमा रोग लाग्ने त्यसमध्ये एक हजार सिरियस हुन्छन भन्ने कुराको ख्याल गरि तयारी गर्नुपथ्र्यो ।’ उनले भने, ‘अस्पतालमा उपचार गर्न आएका एउटालाई कालाजार भेटियो, भारतमा एक डोज पनि औषधि नपाएका कारण उनी फर्किएका रहेछन् । हामीले उपचार गरेर उहाँ घर फर्किनु भएको छ ।’ उनले क्वारेन्टाईन वयवस्थापन गर्न सकेको खण्डमा अहिले पनि महामारीबाट जोगिन सकिने धारणा राखे ।
सामाजिक विकास मन्त्री दल रावलले सबैभन्दा राम्रो सेल्फ क्वारेन्टाइन भएको बताए । ‘यहाँ सेल्फ क्वारेन्टाईन राम्रो भएपनि कर्णालीमा हरेक नागरिकको घरको अवस्था क्वारेन्टाइन बनाउन नसकिने भएका कारण विद्यालयमा राख्नु परेको हो ।’ उनी भन्छन्, ‘कोरोनाबाट जोगिने एक मात्र उपाय भनेको हरेक नागरिक अनुशासनमा बस्नु नै हो । इटाली, अमेरीका, युरोप जस्ता मुलुक थला परेका छन् । कर्णालीमा हामीले अपेक्षा गरेभन्दा बढि नागरिक जो उतै घरबार बनाएरै बसेका थिए, उनीहरु पनि फर्किए । यसले हामीलाई क्वारेन्टाईन व्यवस्थापनमा चुनौति दियो ।’
मन्त्री रावलले आफुहरुले दैलेख, सल्यानलगायतका अन्य जिल्लामा कोरोना जाँच गर्ने ल्यावको जनशक्ति भएको भए तत्काल खबर गर्न आग्रह गरेको बताए । ‘हामीले पिसिआर मेसिन खरिद गरेर दिन सक्छौं तर त्यको लागि ल्याव जनशक्तिको अवस्था के छ भन्ने कुराको जानकारी माग गरेका छौं ।’ उनले भने, ‘अब हरेक नागरिक सचेत बन्न जरुरी छ । कोरोना महामारी विरुद्ध लड्न सरकार एक्लैले सक्दैन । क्वारेन्टाईनमा पनि अनुशासित रुपमा बस्ने गरेको खण्डमा ठूलो सहयोग हुनेछ ।’ क्वारेन्टाईन बस्ने काम सरकारका लागि मात्रै भएको भन्ने बुझाइ व्याप्त भएको बताउँदै मन्त्री रावलले आफ्नो परिवार, सन्तान, गाउँघर जोगाउनका लागि मात्रै क्वारेन्टाईनमा बस्न थालेको हो भन्ने कुरा हरेक नागरिकले ख्याल गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ ।